Shina Tsy hita amin'ny fiara io fenitra io! Mampalahelo fa betsaka ny olona tsy mahalala ny fomba fampiasana azy orinasa sy mpanamboatra | Jiaye
Ity fitsipika ity dia tsy misy amin'ny fiara! Mampalahelo fa betsaka ny olona tsy mahalala ny fomba fampiasana azy io
Ankehitriny fa ny tompona fiara dia tsy mahalala an'i Jack, efa lasa fitaovana mahazatra izy io, amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny vy vy halatra kalitao i Jack, fa tsy toy ny vokatra mitovy kokoa, toy ny fitaovana fanazarana mahazatra ampiasaina, manolotra ny tampon'ny crane ambony. ambany, ny ankamaroany dia mifototra amin'ny fotokevitra mavesatra, ka azo ampiasaina amin'ny fotoana isan-karazany. Ho an'ny olom-baovao, ny fanovana voalohany ny kodiarana sisa dia mety ho fanamby, ka ahoana no tokony hampiasana ny jiro?
Misy karazany roa karazana jack jacks, ny iray dia ny rakitra an'ny rakitra, ny iray hafa dia ny herringbone sy ny firafitry ny diamondra. Ny iray hafa dia ny jack jack. Rehefa mampiasa sipa izahay, dia mila amboarintsika aloha ilay fiara, mba tsy hahatratrarana tsy mijanona, tsy hikapoka, handratra olona. Amin'izay fotoana izay dia tsy afaka ny tsy miraharaha ireo fepetra fampitandremana ilaina izahay, na mametraka ny tadiny fampitandremana anaty fiara rehefa avy milamina.
Rehefa mampiasa ny jack, isika dia mila mandinika ny tany, araka izay azo atao fa misafidy izay mety ho an'ny lozisialy. Raha any amin'ny tany malefaka ny fiara ary tsy misy lalana ahitàna lalana hentitra sy lemaka hanamboarana ny zipo, dia afaka mametraka fanohanana lehibe sy mafy eo ambanin'ilay jack. Amin'izay fotoana izay, amin'ny fampiasana ny Jack, isika koa dia tokony handinika tsara ny lanja farany an'ny ziva, raha toa ka tsy ampy ny hery manohana, mitarika loza.
Ny fiara tsirairay dia amboarina amin'ny alika mba hanohana, ny fiakarana singa Jack dia tokony ho tohanan'ny chassis point point, raha tsy izany dia sarotra ny miaro ny fiara, fa mora manimba an'i Jack ihany koa, simba be kokoa na chassis. Raha tsy izany, rehefa mampiasa ilay saiko isika dia afaka mametraka kodiarana ambanin'ny fiara mandritra ny orana.
Ao amin'ny dingan'ny fampiasana jack, ny fisandratana dia tsy maintsy ho maharitra sy miadana. Satria raha manainga haingana ny hery miasa mafy isika, dia mora ny mahazo ny fanodinam-batana Jack dia tsy afaka mampiasa valiny intsony.
Car Creeper , hydraulic Garage Jack , fanamboarana Tools , 3ton hydraulic Garage Jack , hydraulic Garage Jack 3ton , Fitaovana otomotika,